VA - Bo Bo 1st Anniversary [Disc 2] - Mg Shan Lay
Home Album Ar-Boy Various Artists ရသ ရဲရင့်အောင် လွှမ်းပိုင် သားကြီး သိန်းလင်းစိုး ဝေလ ဂျောက်ဂျက် ဇေရဲ VA - Bo Bo 1st Anniversary [Disc 2]
VA - Bo Bo 1st Anniversary [Disc 2]
11:27:00 AM Album, Ar-Boy, Various Artists, ရသ, ရဲရင့်အောင်, လွှမ်းပိုင်, သားကြီး, သိန်းလင်းစိုး, ဝေလ, ဂျောက်ဂျက်, ဇေရဲ,
1. လွမ်းလွန်းလို့ - ရဲရင့်အောင်
2. ကြိုဆိုပါ၏ - ဝေလ
3. ဒုတိယလူ - Ar-Boy & Hlwan Paing
4. ကလေးရယ် - ဝေလင်း
5. လက်တွေမြှောက် - Right D & FELER
6. အဆုံးသတ်ရလဒ် - သားကြီး
7. လွတ်မြောက်ခွင့်ပေး - စိုးကြီး ၊ စည်သူနှင်းမိုး
8. အတူတူဆုံခွင့် - ဇေရဲ
9. အလိုချင်ဆုံးအရာ - SATAN & DOE DOE & ဝေယံမင်းသူ
10. ကြိုး - ROMI & မိစန္ဒီ
11. နင်မသိလို့ - ဖြိုးကျော်ထိုက်
12. ရင်ခုန်အောင်လုပ် . လုပ် . လုပ်ပြတယ် - စုချစ်ဇော်
13. အိပ်မက်ထဲက မိန်းကလေး - သိန်းလင်းစိုး
14. နင်ရှိမှပြည့်စုံမှာ - ရွှေထူး ၊ Tay Za MC
15. အနာဂတ် ကလေးငယ် - ရသ ၊ ဂျောက်ဂျက် ၊ နေမင်း
16. ခိုနားမယ့်ရင်ခွင် - LR ချန်း
17. ငါ့ဘ၀ - Super Singer & ရတနာဖြူဖြူအောင်
Tags # Album # Ar-Boy # Various Artists # ရသ # ရဲရင့်အောင် # လွှမ်းပိုင် # သားကြီး # သိန်းလင်းစိုး # ဝေလ # ဂျောက်ဂျက် # ဇေရဲ
Labels: Album, Ar-Boy, Various Artists, ရသ, ရဲရင့်အောင်, လွှမ်းပိုင်, သားကြီး, သိန်းလင်းစိုး, ဝေလ, ဂျောက်ဂျက်, ဇေရဲ